DAACAD IYO RUTABAGA: WAA MAXAY FARQIGA U DHEXEEYA DALAGYADA, WAA ISKU MID AMA MA AHA, MIRO KHUDAAR AYAA KU KALA DUWAN MUUQAALKA, HALABUURKA IYO ASALKA, IYO MIDKEE KA WANAAGSAN? - BEER CAGAARAN
Farqiga aan la saarnayn: waa maxay farqiga u dhexeeya galka iyo boodhka?
Dabacad iyo rutabaga - waxay u eg yihiin midabka, qaabka, iyo dhadhanka. Hase ahaatee kuwan waa laba khudaar oo kala duwan.
Labaduba waxay leeyihiin dhowr waxyaabood oo faa'iido leh, oo ay ku jiraan xaddi badan oo nafaqo iyo fitamiino. Khudaarta labadaba waxay ku badan yihiin jardiinooyinka shakhsi ahaaneed waxayna caan ku yihiin beeraleyda hiwaayadda. Ciriiri ku ah Bisaylka iyo iska caabida qabow. Waxaa la cunaa cusbo cusub oo la isku qurxiyo.
Inkasta oo ay muuqato dhaqamadaasi aad ayey isku mid yihiin, laakiin wali way ka duwan yihiin dhadhan khudradeed. Aynu isku dayno inaan fahanno farqiga u dhexeeya dhaqamada sida bagalka iyo rutabaga.
Astaamaha dhirta aasaasiga ah
Waalidiin qudaar ah
Qaar badan waxay noqon doontaa helitaanka helitaanka dabocase ee ka mid ah calyaanka kaabajka qoys ee kaabajka. Calaamaduhu waxay badanaa ku soo baxaan dhowr sano gudahood.
Xagaaga koowaad waa waqtiga loogu talagalay samaynta rosette ee caleemaha asalka ah iyo waxa aan si toos ah ugu adeegno miiska - dalagga xidid leh dhexroor ah dhowr centimeters. Waxay yeelan kartaa qaabab kala duwan laga soo koobay si aad u dheer, oo la mid ah dabacasaha.
Caawimaad! Gambarka midabka dabocase waa mid qarsoodi ah: maqaarku wuxuu noqon karaa mid huruud ah, cagaaran, guduud, burgundy, casaan. Jirka waa fareem, caddaan ama jaalle - waxaa loo isticmaalaa cunto.
Caato oo ka badbaaday jiilaalka soo saaro asliga ah oo leh caleemaha ubax ka yar mitir hal mitir iyo mitir dhererka. Laga soo bilaabo waxay ka baxaysaa midhaha - sariiro qumman, iyo inflorescences, ka dhigan gaashaan leh tufaax huruud ah.
Swede waxay leedahay cayayaanka isku mid ah iyo qoyska sida dabocase. Waxay horumarisaa laba sano si la mid ah: xagaaga ugu horeeya - muuqaalka ah ee xidid la cuni karo, labaad - koritaanka caleemaha ubax iyo abuur.
Cunno jadeecada ah waa mid adag, cagaaran cagaaran ama casaan-guduud. Qaababka asalka ah waxay ku kala duwan yihiin oval-cylindrical si loogu dhejiyo guri. Rootiga caleemaha asalka ah ayaa ku wareegsan.
The ugu delicious ku qarsoon hoos maqaarka ee tuber - jidhka iftiinaha iftiin. Jidhka jaalaha ah waxaa badanaa loo dhigaa miiska, dadka cadaanka ahna wuxuu u baxaa si uu u quudiyo lo'da. Miisaanka qaybta la cuni karo ee beertu waa ballaadhan, oo gaarsiisan 20 kg ee noocyada calafka.
Duufaan isweydaar ah - cadaydo leh xayawaan dahab ah. Midhaha ayaa ah caleemo qoyan oo ubax ah ama madow-madow ku wareegsan.
Sababtoo ah swede waa guntin of turnips iyo kaabajka, dabiici ah oo loo caleemo saaray injineernimada, qarnigii 17aad, waxay u muuqdaan in ay la mid tahay "hidaha" hiddo. Farqiga ugu weyn ee muuqaalka ah waa in khudaarta cagaaran ee rutabaga ay ka weyn yihiin, jidhkoodu waa midabyo mugdi ah, oo ku xiran dusha midabada.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay borotiinka, dufannada iyo carbohydrates khudaarta way isku mid yihiin. In gaajo ka badan calcium, waxaa jira saamiga yar ee fitamiin A, taas oo aan ku jirin guntiga, qadar macquul ah ee succinic acid, sonkorta iyo fitamiin PP.
Digniin! Swede ayaa ka sarreysa awoowgeeda macdanta (potassium, sulfur, fosfooraska, birta) iyo fiitamiin C. Waxa kale oo ku jira carotene iyo ascorbic acid, adkaysi u ah kaydinta muddada dheer.
Rutabaga waxaa asal ahaan laga soo qaatay sida nafaqo iyo nafaqo badan oo loogu talagalay bagalka. Sidaa darteed, waxaa badanaa loo isticmaalaa sida quudinta xoolaha, halkaasoo loo baahan yahay qiyaasta. Isla mar ahaantaana, noocyada kala duwan ee taranka, dabocase, ayaa si muuqata loo qaybiyey adduunka oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, tani ma dhicin xaqiiqda ah in noocyada miiska ee khudaarta leeyihiin meel cunto cunno ah. In kasta oo xaqiiqda ah in inta badan bannaanka u door bidaan midabada by dhadhan, rutabaga waxaa loo tixgeliyaa nafaqo badan sababtoo ah content sare ee qalalan.
Waxaa la aaminsan yahay in geela duurjoogta ah uu ka yimid laba qaybood: Galbeed iyo Waqooyiga Yurub, iyo sidoo kale Afghanistan iyo India. Si loo beero warshadda 10-15 kun oo sano ka hor, markii ugu horraysay waxay bilaabatay dadka deggan Koonfur-Galbeed Aasiya. Ka dib iyaga, bagalka ayaa noqday mid caan ka ah wadamo badan oo kale. Noocyada maxaliga ah waxay hayaa sifooyinka qaababka aabaha. Rutabaga soo koraya waa boqolkiiba boqol dhaqanka Waqooyiga Yurub.
Aragtida ugu caansan, sida aynu horeyba u soo qornay, ayaa sheegaya in rutabaga uu u yimid sidii loo yaqaano qalabka geedka iyo kaabajka. Laga yaabee, dalkeeda hooyo waa Sweden. Duurjoogta, rutabagus wuxuu ku koraa oo kaliya sida haragga ee qaybo ka mid ah Waqooyiga Afrika.
Inta badan waxay kuxirantahay doorashooyinka dhadhanka ee qofka. Kalluumeysatadu waxay leedahay qadhaadh, sidaas awgeed waxay ku habboon tahay ragga. Isla mar ahaantaana, jadeecadu waxay kufaraxsan tahay la'aanta dhadhan iyo dhidid la'aan. Si kastaba ha ahaatee, beeralayda waayo-aragnimo ku talinaynaa diyaarinta digriiga dhalinyarada, maxaa yeelay waqtigan ma haystaan ​​waqti ay ku ururiyaan qoyaan xad dhaaf ah ee saxarka.
Khatarta ama rutabaga - khilaaf, oo la mid ah khilaafka u dhexeeya duck iyo goose, saytuun iyo saytuun. Dhaqannada waa qaraabo toos ah oo isku mid ah. Waxa ugu muhiimsan waa in la daryeelo khudradda marka la kobcayo oo si wanaagsan loo diyaariyo. Laakiin tani waa mowduuc loogu talagalay maqaal kale.